Xinhua Myanmar - သမ္မတဘိုင်ဒန်က ဇွန်လ ဥရောပခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတ ပူတင်နှင့်တွေ့ဆုံရန် မျှော်လင့်
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်(ဝဲ) နှင့် ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတ ဗလာတီမာပူတင်(ယာ) တို့အားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) North America
ဝါရှင်တန်၊မေ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က လာမည့် ဇွန်လတွင် သွားရောက်မည့် ၎င်း၏ ဥရောပခရီးစဉ်အတွင်း ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာတီမာပူတင်နှင့်အတူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း မေ ၄ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလက သမ္မတ ရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက် ပထမဆုံး ပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ် ဇွန်လတွင် ဥရောပသို့သွားရောက်မည့် ၎င်း၏ခရီးစဉ်အတွင်း ပူတင်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိ သတင်းထောက်၏ မေးမြန်းချက်အပေါ် ဘိုင်ဒန်က “ ဒါဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့မျှော်မှန်းချက်ပါပဲ ၊ အဲဒီအတွက် လုပ်နေပါတယ် ” ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဘိုင်ဒန်သည် ဇွန် ၁၁ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ ဗြိတိန်နိုင်ငံ Cornwall ၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ တစ်နိုင်ငံချင်းသီးသန့်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းသည် ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် နေတိုး(NATO)ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်စ်ဆဲလ်မြို့သို့လည်း သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ဘိုင်ဒန်က နှစ်နိုင်ငံအရေးကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးရန် လာမည့် နွေရာသီ ဥရောပခရီးစဉ်အတွင်း ရုရှားသမ္မတပူတင်နှင့်အတူ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတစ်ခု ပြုလုပ်သွားရန် အဆိုပြုထားကြောင်း အမေရိကန်မီဒီယာက အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ အိမ်ဖြူတော်က ယင်းအစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခြင်းမရှိပေ။
အမေရိကန် နှင့် ရုရှား နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးသည် မကြာသေးခင်နှစ်များက ယိုယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ယူကရိန်းအရေး နှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ခါးခါးသီးသီးသဘောထားကွဲလွဲမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဖြစ် အပြန်အလှန်စွပ်စွဲခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
WASHINGTON, May4(Xinhua) -- U.S. President Joe Biden said Tuesday that he expects to holdameeting with Russian President Vladimir Putin during his trip to Europe in June.
Relations between Washington and Moscow have been adversarial in recent years. The two were bitterly divided over Ukraine and cybersecurity issues, and they mutually accused the other of domestic political interference. Enditem
Previous Article မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် ရထားသံလမ်းပြိုကျမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၄ ဦးအထိရှိလာ
Next Article မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် ကောင်းကင်ရထားလမ်း ပြိုကျမှုကြောင့် လူ ၁၅ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး ၇၀ ဦးဒဏ်ရာရ